Fifty Key Thinkers on Development | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← Randomness of December
Wikipedia Statistics: Burmese →
၈။ ဂျိမ်းစ် အမ်. ‘ဂျမ်’ ဘလော့တ် James M. ‘Jam’ Blaut
၉။ နော်မန် ဘောလက် Norman Borlaug
၁၀။ အက်စတာ ဘောစရပ်(ပ်) Ester Boserup
၁၁။ ဟာရိုး ဘရွတ်ဖီးလ်ဒ် Harold Brookfield
၁၂။ ဖာနန်ဒို ဟင်းနရစ် Fernando Henrique
၁၃။ မိုက်ကယ် ဆာနီယာ Michael Cernea
၁၄။ ရောဘတ် ချမ်းဘား Robart Chambers
၁၅။ ဟောလစ် ဘီ. ချေနရီ Hollis B. Chenery
၁၆။ ဒိန်း အယ်လ်ဆင် Diane Elson
၁၇။ အန်ဒရေ ဂန်ဒါ ဖရန့်ခ် Andre Gunder Frank
၁၈။ ပေါ်လို ဖရီယာ Paolo Freire
၁၉။ ဂျွန် ဖရစ်ဒ်မန်း John Friedmann
၂၀။ မိုဟန်ဒက် (မဟတ္တမ) ဂန္ဒီ Mohandas (Mahatma) Gandhi
၂၁။ ဆူဆန် ဂျော့ဂျ် Susan George
၂၂။ အလက်ဇန်ဒါ ဂါရှင်ကွန်း Alexander Gerschenkorn
၂၃။ ဂျရယ် ကေ. ဟယ်လီနာ Gerald K. Helleiner
၂၄။ အယ်လ်ဘတ် အို. ဟာ့ချ်မန်း Albert O. Hirschman
၂၅။ ရစ်ချတ် ဂျိုလီ Richard Jolly
၂၆။ ချားလ်စ် ပူးဝါး ကန်ဒလီဘာဂါ Charles Poor Kindleberger
၂၇။ ဆာ ဝီလျံ အာသာ လူးဝစ် Sir William Arthur Lewis
၂၈။ မိုက်ကယ် လစ်ပတန် Michael Lipton
၂၉။ ဘုန်းတော်ကြီး သောမတ်စ် ရောဘတ် မေးလ်းသပ်စ် Reverend Thomas Robert Malthus
၃၀။ မော်စီတုန်း Mao Zedong
၃၁။ ကားလ်မာ့စ် Karl Marx
၃၂။ မန်းဖရက်ဒ် မက်စ်-နိဖ် Manfred Max-Neef
၃၃။ တားရန့်စ် ဂရေး မဂ္ဂီး Terence Gray McGee
၃၄။ ဂန်နာ မာဒယ် Gunner Myrdal
၃၅။ ကွာမီ ဖရန်စစ် နက်ကရုမဟ် Kyamw Francis Nkrumah
၃၆။ ဂျူးလိယက် ကမ်ဘာရာဂွေ နိုင်ရီရီ Julius Kambaragwe Nyerere
၃၇။ ရာအူးလ် ပရီဘစ် Raul Prebisch
၃၈။ ဝေါ်လတာ ရုဒနီ Walter Rodney
၃၉။ ဝေါ့လ်ထ် ဝှစ်တ်မန်း Walt Whitnam Rostow
၄၀။ အီး. အက်ဖ်. (ဖရဇ်) ရှူးမာချာ E. F (Fritz) Schumacher
၄၁။ ဒူဒလီ ဆီယာစ် Dudley Seers
၄၂။ အမတ္တရာ ကူးမား ဆင်း Amartya Kumar Sen
၄၃။ ဗန်ဒနာ ရှီဗာ Vandana Shiva
၄၄။ ဟန်စ် ဝုလ်ဖဂန် ဆင်ဂျာ Hans Wolfgang Singer
၄၅။ ဂျိုးဇက်ဖ် စတစ်ဂလစ် Joseph Stiglitz
၄၆။ ပေါလ် ပက်ထရစ်ခ် စထရီတန် Paul Patrick Streeten
၄၇။ ဂျိမ်းစ် တိုဘင် James Tobin
၄၈။ မာဘတ် အယ်လ် ဟက်ခ် Mahbub Ul Haq
၄၉။ အဲရစ် အာရ်. ဝုလ်ဖ် Eric R. Wolf
၅၀။ ပီတာ ဝေါ်စလီ Peter Worsley
2 responses to “Fifty Key Thinkers on Development”
I cannot read the font of this post.
pls check sidebar for font download
I use Myanmar3 font